I-PCB Clone -Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasungulwa ngo-2000.Sibandakanyeka kwi-PCB engama-1-32 ngokukhawuleza, ukugcinwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo zazo zonke izixhobo zonyango, izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano zeselula.ezinye zezona zinamandla kwaye ookopolotyeni abanempembelelo kunye namashishini afana neenkonzo zokumisa enye yeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ulungelelwaniso lwePCB, ukuqhekeka kwe-IC, uyilo lwePCB, ukuqaqanjiswa kwe-IC, uyilo lwasemva lwe-chip, ulungiso lweSMT, ubuqhetseba bePCB, imveliso yomzekelo kunye nokulungisa ingxaki.
Isebenza njani inkqubo yeClone Clone?
Inyathelo1, sithatha isampulu yebhodi yakho kwaye siwahlube onke amalungu ebhodini kwaye senze ibill yezinto (BOM).
Sisebenzisa amagama eendawo ezikhoyo ebhodini (amagama) okanye senze awethu ukuba akukho nanye esijongayo ukubona ukuba onke amacandelo aphambili afumanekayo.Sifumana iinkcukacha kuwo onke amalungu kwaye siquka ezi ne-BOM.
Inyathelo2, sisebenzisa inkqubo yethu yokuthengisa ukwenza ifayile yePCB okanye ifayile yeGerber.
Inyathelo3, nje ukuba sibe neFayile yePCB kunye noluhlu lweBOM, sinokwenza ifayile yesikim.
Emva kokukhuphela i-PCB, sinokuthatha iklone yakho kwinyani kunye nokuqamba kwe-PCB kunye neenkonzo zebandla le-PCB.Siza kubonelela ngamaxabiso KUPHELA emva kokufumana i-BOM.Senza umgaqo-nkqubo ukubonelela ngamaxabiso KUPHELA emva kokugqiba i-BOM.Leyo kuphela kwendlela esinokuqinisekisa ngayo amaxabiso achanekileyo.